एमाले संसदीय दलको बैठक सुरु, कोको गए को-को गएनन ? – eSidhakura
मुख्य पृष्ठबिशेष खबरएमाले संसदीय दलको बैठक सुरु, कोको गए को-को गएनन ?
एमाले संसदीय दलको बैठक सुरु, कोको गए को-को गएनन ?
काठमाडौं -नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठक सुरु भएको छ। प्रधनमन्त्री निवास बालुवाटारमा केहीबेरअघिदेखि बैठक सुरु भएको हो। पार्टीभित्र देखिएको समस्या समाधानको विषयमा छलफल गर्न बैठक बसेको सांसद विशाल भट्टराईले जानकारी दिए।
वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला राखेपछि एमालेमा संकट देखिएको बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदीय दलको बैठक राखेका हुन्। नेकपा एमालेले गुटगत भेला गर्ने नेताहरूलाई स्पष्टीकरण र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले गुटगत भेला नगर्न र पार्टीबाहेक अरु कसैको निर्देशन नमान्न सांसदहरूलाई आह्वान गरेको छ ।बैठकले आत्मालोचनासहित संसदीय दल र पार्टीको कार्यक्रम सहभागी हुन सांसदहरूलाई आह्वान गरेको हो ।
दलका नेता केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षमा बसेको बैठकले अन्यथा विधान अनुसार स्पष्टीकरण र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनीसमेत दिएको छ ।माधव नेपाल पक्षका केही सांसद बैठकमा सहभागी भएपनि अरु बाटोबाटै फर्किएका थिए । सो पक्षका सांसदहरुले अबदेखि बैठकमा भाग लिने बताएका छन् । दलको बैठकले आत्मालोचनासहित फर्किन आग्रह गरेको छ ।
बैठकमा सहभागी हुन हिँडेका नेपाल–खनालका सांसद बीचबाटोबाटै फर्किएर राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला भइरहेको सानेपाको हेरिटेज गार्डेनमा पुगेका छन्। बैठकमा यसअघि कतै नहुलेका सांसद लालबाबु पण्डित, पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियानमा लागेका सांसद तुलशा थापा पनि सहभागी रहेको बतालुवाटार स्रोतले बतायो।
नायक किशोर खतिवडाले लक्ष्मीलाई बिहे गर्न मन्दिरमा बोलाएर भागे पछि यस्तो रुवाबासी [भिडियो]
को हुन यी सुन्दरी ? जसको ‘फिगरले खिच्यो संसारको ध्यान, हेरौँ बोल्ड १६ तस्बिरहरु
नयाँ वर्षमा नेपाल टेलिकमको अफरै अफर !